IGrenada yethula i-hotline entsha yokuhamba
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zeGrenada Breaking » IGrenada yethula i-hotline entsha yokuhamba
Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • I-Caribbean • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Ucingo oluthathwa njengoludingekile yizikhulu zeGrenada Tourism ukusiza abahambeli, izivakashi, izivakashi noma abantu ababuyayo
UMnyango Wezokuvakasha kanye neGrenada Tourism Authority (GTA) sebethule ucingo olusha oluzobhekana ngqo nemibuzo ephathelene nokuvakasha. Le nombolo yocingo ithathwa njengeyidingekile yizikhulu zezokuvakasha ukusiza abasebenzela ezokuvakasha, abanikazi bezokuvakasha, izivakashi noma ababuya ezweni ngemibuzo ejwayelekile mayelana nezinqubo zokungena, umhlahlandlela wokuthi ungahlala kuphi noma uye kuphi lapho uvakashele eGrenada, Carriacou & Petit Martinique. Okulandelayo izinombolo ezishaywayo:
Ucingo lwamahhala e-USA kuphela - 1 888 251 1732 - 8am kuya ku-10pm (Isikhathi esijwayelekile sase-Atlantic)
Emhlabeni jikelele - 1 213 283 0754 - 8am kuya ku-10pm (Isikhathi esijwayelekile sase-Atlantic)
Abafonayo esiqhingini - 440-0670 - 8am kuya ku-4pm
UNgqongqoshe Wezokuvakasha, Ezokundiza Kwabantu, Ukulwa Nesimo Sezulu kanye Nezemvelo Mnu. UDkt Clarice Modeste-Curwen uthi le nombolo yocingo kuhloswe ngayo, 'ukwenza inqubo yokuthola ulwazi ibe lula kakhulu njengoba izihambi zenza isinqumo sokuza IGrenada emsulwa, iSpice YaseCaribbean. Siyajabula ukunweba amahora atholakala ku-inthanethi ukuqinisekisa ukuthi sigcina izindaba eziningi ngangokunokwenzeka. ”
Ukuhlasela kwamaphekula kwenzeka e-Uganda